Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ny karazana mpamono afo tsara indrindra
Ny mpamono afo voalohany dia natolotry ny mpahay simia Ambrose Godfrey tamin'ny 1723. Hatramin'izay dia maro karazana fitaovana famonoana novolavolaina, novaina ary novolavolaina.
Saingy ny zavatra iray dia mijanona tsy miova na inona na inona vanim-potoana - singa efatra no tsy maintsy misy a afo hisy. Ireo singa ireo dia misy oksizenina, hafanana, solika ary fanehoan-kevitra simika. Rehefa esorinao ny iray amin'ireo singa efatra ao amin'ny "telozoro afo», Azo vonoina ny afo avy eo.
Na izany aza, raha te hamono afo dia tsy maintsy ampiasainao ny marina extinguisher.
Mba hahafahana mamono afo am-pahombiazana dia tsy maintsy mampiasa ny famonoana mpamono afo marina ianao. (Sary / Greg Friese)
Maninona ny mpamono afo, fiara mpamonjy voina no mila fitaovana famonoana finday
Lesona amin'ny fampiasana fitaovana famonoana afo
Ahoana ny fividianana fitaovana famonoana afo
Ireo karazana fitaovana famonoana afo mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny karazan-tsolika misy afo dia:
Famonoana afo: Ny famonoana afo dia manaparitaka ny afo amin'ny alàlan'ny fanesorana ny singa hafanan'ny triatra afo. Nampiasaina ho an'ny hain-dakilasy A ihany izy ireo.
Famonoana afo simika maina: Ireo mpamono zavatra simika maina dia mamono ny afo amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny fihetsika simika ao amin'ny telolafy afo. Izy ireo dia mandaitra indrindra amin'ny hain-dakilasy A, B ary C.
Famonoana afo CO2: Ny famonoana dioksidan'ny karbaona dia manaisotra ny singa oksizenina ao amin'ilay telolafy afo. Izy ireo koa dia manala ny hafanana amin'ny famoahana mangatsiaka. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny afo Kilasy B sy C.
Ary satria samy hafa ny fandrehitra ny afo, misy karazana fitaovana mpamono afo miorina amin'ny karazana afo. Ny famonoana fitaovana sasany dia azo ampiasaina amin'ny kilasy afo mihoatra ny iray, fa ny hafa kosa mampitandrina ny amin'ny fampiasana fitaovana famonoana kilasy manokana.
Ity misy fahatapahan'ny famonoana afo voasokajy isan-karazany:
Ireo mpamono afo dia sokajiana isan-karazany: Nampiasaina ny mpamono afo:
Famonoana afo kilasy A. Ireto fitaovana famonoana afo ireto dia ampiasaina amin'ny afo mirehitra miaraka amin'ny may, toy ny hazo, taratasy, lamba, fako sy plastika.
Famonoana afo kilasy B Ireto fitaovana famonoana afo ireto dia ampiasaina amin'ny afo misy rano mirehitra, toy ny menaka, lasantsy ary solika.
Famonoana afo Class C Ireto fitaovana famonoana fitaovana ireto dia ampiasaina amin'ny afo mirehitra miaraka amin'ny fitaovana elektrika, toy ny motera, mpanova ary fitaovana.
Famonoana afo kilasy D Ireto fitaovana famonoana afo ireto dia ampiasaina amin'ny afo misy metaly mora may, toy ny potasioma, ny sodium, ny aliminioma ary ny manezioma.
Famonoana afo Class K Ireto fitaovana famonoana afo ireto dia ampiasaina amin'ny afo may menaka sy menaka mahandro toy ny tavy biby sy legioma.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny afo tsirairay dia mitaky famonoana afo hafa mifototra amin'ny toe-javatra.
Ary raha hampiasa fitaovana famonoana ianao, dia tadidio fotsiny ny FIAINANA: esory ny tsimatra, alefaso ny fantsom-by na fantsona eo am-pototry ny afo, potsero ny ambaratonga fandidiana hanafoanana ny fitaovana mpamono afo ary hamafana ny noza na fantsona. mandra-pahafatin'ny afo.